काठमाडौं नै खुल्ला दिसामुक्त हुन बाँकी « SaighaliKhabar.com | सैघालीखबर डट कम
काठमाडौं नै खुल्ला दिसामुक्त हुन बाँकी
काठमाडौं । देशको राजधानी मै मान्छेहरु खुल्ला दिसा पिसाब गर्छन् भन्दा पत्याउनुहुन्छ ? सुन्दा अचम्म लागेपनि यो कुरा सत्य हो । काठमाडौंमा अहिले पनि खुल्ला दिसा पिसाब हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म पनि काठमाडौंलाई खुल्ला दिसा पिसाबमुक्त गर्न सकेको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख देवेन्द्र झाले काठमाडौंले आफूलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन दौदधुप गरेपनि अहिलेपनि खुल्ला दिसामुक्त गर्न नसक्नु आफैमा लज्जाबोध भएको स्वीकार गरे ।
अहिले काठमाडौ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा हुन सबैभन्दा चुनौती रहेको उनले बताए ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ र वास मिडिया फोरमले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै झाले यो सत्य स्वीकार गरेका हुन् ।
नेपालमा २०६८ साल अगाडी सरसफाईमा ४६ प्रतिशतमात्र पहुँच भएपनि अहिले ९९ प्रतिशतमा सरसफाईको पहुँच पुगेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएका छन् भने बाँकी १३ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छ । यसैगरी २४ गाउँपालिका र ४४ नगरपालिका पनि खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा हुन बाँकी छ ।
प्रत्येक शौचालय निर्माणका लागि कम्तिमा पनि १३ हजार १ सय ३३ रुपैया लागत लागेको अनुमान गरिएको छ ।
दोलखा र काभ्रे यही साता खुल्ला दिसा मुक्त हुँदैछ भने देशकै राजधानी काठमाडौ, सिन्धुपाल्चोक, कपिलबस्तु, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा ,मोरङ, सर्लाही, बारा भोजपुर र सोलुखुम्बु खुल्ला दिसा मुक्त हुन बाकी छ । सरकारले आउने आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ लाई लुम्बिनी भ्रमण बर्ष मनाउने तयारी गरिरहँदा कपिलबस्तु अझै खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन् ।
सरसफाईको कमीबाट बर्षेनी ८ हजार बालबालिकाको मृत्यु
केही बर्ष अघि नेपालमा प्रत्येक बर्ष सरसफाईको अभावमा ५ बर्षमुनीका १० हजार ८ सय बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको थियो ।
अहिले सरसफाईमा आएको व्यापक सुधारका कारण बर्षेनी मर्ने बालबालिकाको संख्या घटेर ६ हजार पुगेको छ । अझै प्रत्येक दिन सरसफाईको कमीबाट ३० जना बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ ।
सफा पानी र सरसफाईमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि ८० प्रतिशत संक्रामक रोगबाट बच्न सक्ने काठमाडौं विश्वबिद्यालयका सामुदायिक चिकित्सा बिभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. सुनिल कुमार जोशीले बताए ।
दिसाको समुचित व्यवस्थापन नहुदा यसका कारण ६ हजार बालबालिकाको अकालमा ज्यान गइरहेको बारेमा उनले कार्यक्रममा तथ्यांक प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।